FIFIDIANANA MANGARAHARA - SAMBAVA : Nomena fiofanana ireo mpanara-maso
Hisian’ny fifidianana mangarahara sy eken’ny rehetra ary koa manaja ny demokrasia dia mitohy hatrany amin’izao ny fanomezan’ireo firaisamonim-pirenena fiofanana ho an’ireo mpanara-maso ny fifidianana manerana ny Nosy. 14 mai 2019
Ho an’ny Distrikan’i Sambava dia natomboka tamin’ny alahady 12 mey teo, ny fanomezana fiofanana ireo mpanara-maso ny fifidianana any amin’iny Faritra iny ary mbola nitohy, omaly, alatsinainy 13 mey 2019 izany.
Mpanara-maso fifidianana miisa 16, solontena avy amin’ireo kaominina marobe ao amin’ny Distrikan’i Sambava no nomena fiofanana nandritra ireo andro ireo. Tao amin’ny ivon-toeran’ny CRINFP any an-toerana no natao ny fiofanana ka ny firaisamonim-pirenena avy amin’ny “Hetsika Rohy” no tompon’antoka tamin’ny fampiofanana. “Tanjon’ny “Rohy” ny fiarovana ny tena safidim-bahoaka sy fametrahana ny mangarahara tanteraka amin’ny fifidianana ka izany no mahatonga azy ireo tsy mikely soroka amin’ny fampiofanana ireo mpanara-maso fifidianana rehetra”, hoy ny tompon’andraikitra avy ao anivon’ity firaisamonim-pirenena ity.
Ireto solontena 16 avy amin’ny kaominina ao amin’ny Distrikan’i Sambava ireto indray araka izany no mampita ny fiofanana azon’izy ireo avy tamin’ny “Rohy” ary mampiofana ireo eny anivon’ny Birao fandatsaham-bato any amin’ny fokontany misy azy avy.